Khuphela le nkqubo siyakhele ukulungisa inkqubo yethu? | Martech Zone
Khuphela le Nkqubo eyakhelwe ukulungisa inkqubo yethu?
NgoLwesihlanu, Meyi 9, 2008 NgoLwesihlanu, Meyi 9, 2008 Douglas Karr
Abathengi bethu basebenzisa iPCAnywhere kwimicimbi yabo yenkxaso. Ndiqhuba iVista-ke xa ndizama ukulayisha abathengi bethu abanelayisensi, ndadibana ngokukhawuleza nomyalezo wokungangqinelani kwaye isifaki sayeka.
Xa betyelele indawo yeSymantec, ngokuqinisekileyo balungisa umba wokuhambelana nefayile ye- Phucula kuguqulelo 12.1. Inyoka? Kuya kufuneka ubhatale i-100 yeedola ukuphucula. Kufuneka ndibenayo, ke ndibhatale i $ 100. Ukuhlawula i-100 yeedola kwisicelo sokusebenza ngokulula emva kokuba uhlawule iphepha-mvume lokuqala kwanele ngokwaneleyo ukuba ube nomsindo.
Ngoku ukuba ndine-12.1 elayishiwe, ndineengxaki zeetoni ngayo. Insiza ibonakala isebenza ukuba ndijonga kuMlawuli womsebenzi, kodwa iwindow ayifumaneki. Kwaye ukuba ndiyayinyusa ifestile, ayinanto kwaphela. Ndiqale ukuphanda umba kwiiforamu zeSymantec. Inqaku elinye endilifumeneyo linqaku elihle kwi ISymantec Autofix program.
Luhlobo luni lwenkampani yesoftware ebhala inkqubo elungisa imicimbi echaphazela inkqubo yabo yoqobo? Ndicinga ukuba iSymantec iya kuba yile nkampani.
Hayi Symantec: Ukuba uyazi ukuba yintoni ingxaki kwaye uyilungisa njani, beka i-fix yakho yokuqala isicelo !!!
Emva kokufaka inkqubo ye-Autofix, iPCAnywhere isaqhubeka nokuba nemicimbi. Mna cringe xa ​​kufuneka ndisebenzise nayiphi na inkqubo yeSymantec… Kudala ndibhala ngazo.
tags: amakhadiI-plugin ye-iphoneUmxholo we-iphoneiijramishishini mobileintengiso yangaphandleUmphathi wegama
Lixesha lokuTshintsha amaQhinga okuThengisa nge-imeyile xa…
Yongeza i-Icon ye-Twitter kwiBhlog yakho
Meyi 10, 2008 kwi-8: 59 AM
Agasti 22, 2008 kwi-5: 58 AM
Oktobha 22, 2008 ngo-5: 05 PM